Okwu: Sistem Mgbasa ozi agbakwunyere maka Digital Publishing | Martech Zone
Akwụkwọ niche na-aga n'ihu na-eme ka ọdịnaya dị iche iche lekwasịrị anya gaa iche iche. Ọ bụ ezie na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa, Mgbakwunye na sistemụ mgbasa ozi na-aga n'ihu na-achịkwa ahịa maka usoro nhazi ha dị mfe na ọnụ ala dị ala na mbu, ha na-enwetakwa obere pịa na ọnụego ntụgharị. N'ihi na ha dị ọnụ ala, ha ka nwere ike ị nweta ụgwọ ọrụ dị egwu ma nwee ezigbo nkwụghachi na ntinye ego maka ndị ahịa.
Chee echiche banyere nchọgharị gị na omume nyocha. Ka m na-ele anya na desktọọpụ m na igbe mbata email, ana m ejupụta na ozi ịntanetị na mgbasa ozi sitere na ndị mgbasa ozi dị mkpa. Ana m ahụ ọtụtụ narị, ikekwe ọbụna ọtụtụ puku, ahịa ihe kwa izu. Mana ka m na-eche maka nzipu ozi m na ndebanye aha dijitalụ, ọ bụ naanị akwụkwọ ole na ole m debanyere aha ma nyefee oge n'ime izu. Omume nke ihe nchọgharị weebụ na ahụmịhe nke ịtụgharị na mbipụta dijitalụ na akwụkwọ ma ọ bụ na mbadamba ihe dị iche.
E nwere ọtụtụ puku mbipụta n'ebe ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-ada na desktọọpụ onye na-eme mkpebi (site na ozi ma ọ bụ mbadamba). Na esemokwu, olee otu i si etinye mbipụta dijitalụ na ngwakọta mgbasa ozi gị? Kedu otu ị ga esi ahazi, mepụta ma bipụta mgbasa ozi maka mbipụta ndị ahụ? Nke ahụ bụ ihe Okpokoro bụ maka.
Specle na-agbanwe ụwa nke ibipụta na imepụta mgbasa ozi n'ịntanetị, na-ewepụta ọmarịcha ngwanrọ ngwanrọ maka ibipụta na mbupụta mbadamba mbadamba.
Specle na-achịkwa, na-ahazi ma na-anapụta ọtụtụ puku faịlụ mgbasa ozi kwa ọnwa maka nnukwu ndị ahịa, gụnyere ndị nkwusa ukwu (Hearst, Condé Nast, News UK, Guardian, DMG media, TimeInc UK); na-eduga ndị ọrụ okike (McCann Erickson, VCCP, BBH) na ụdị ụwa niile nnukwu na obere. Interface maka Specle enweghị ike ịdị mfe, naanị chọọ na isiokwu, chọta mbipụta, nweta nkọwapụta wee nye mgbasa ozi:
Specle na nso nso a kwupụtara isi ọrụ mmekọrịta maka Ngwọta Adobe Digital Publishing, na-eme ka mmepụta nke itinye na mgbasa ozi dijitalụ na-adọrọ adọrọ na ngwa na-enweghị mkpa koodu. Usoro mgbasa ozi agbakwunyere Specle ga-eme ka ndị okike na ndị otu imepụta ihe mgbasa ozi na ngwa ọ bụla iji Adobe DPS. Sọftụwia Specle ga - eme ka ọ dị mfe karịa oge ọ bụla maka ụlọ ọrụ okike na ndị mbipụta iji nyefee mgbasa ozi mmekọrịta mara mma.
Gbasara Adobe Digital Publishing Solution
Adobe DPS bụ ngwa ọrụ weebụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta mbipụta dijitalụ nke mbipụta ha. Tù na-emepụta ihe na ndị okike nwere ike ịmepụta ngwa ngwa mkpanaka mara mma n'enweghị koodu ederede. N'iji DPS, òtù nwere ike ịchụpụ itinye aka site na ahụmịhe ngwa mkpanaka, jiri ike mbipụta akwụkwọ na-aga n'ihu na-ejikọ ndị ọrụ, ma nyefee mmetụta azụmaahịa nwere atụ site na ngwa-niile nwere nyiwe azụmaahịa sitere Adobe.
Chetara si n’ala bilie, Adobe DPS ga-enye ndị ọrụ ohere mgbanwe na ohere ka mma itinye ndị na-ege ha ntị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịme mgbasa ozi mbipụta, ị nwekwara ike ịme mgbasa ozi dijitalụ. Specle abanyela na ngwa mmemme ngwa Adobe (API) iji gbanwee ohere mgbasa ozi dijitalụ - ọkachasị na ngwa - ma mepụta ohere mgbasa ozi dị ike.
Tags: Ngwọta Adobe Digital Publishingdps adobeBBHCondé Nastdijitalụ magazinembipụta dijitalụDMG mgbasa oziGuardianHearstmgbasa ozimagazine magazineMcCann EricksonAkụkọ UKugbaTimeInc UKVCCP